Global Voices teny Malagasy » Notazonin’ny Manampahefana Tajik Ilay Mpanoratry ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy » Print
Notazonin'ny Manampahefana Tajik Ilay Mpanoratry ny Global Voices
Voadika ny 27 Jona 2014 3:35 GMT 1	 · Mpanoratra Global Voices Nandika Erikah
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Tajikistan, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Nalefa  voalohany tao amin'ny tranonkala Eurasianet.org  ity lahatsoratra ity, ary nahazoana alalana ny namerenana nandefa azy.
Miteraka ahiahy amin'ireo eny amin'ny anjerimanontolo sy ireo mpanao gazety any Azia Afovoany ny fitànana tsy nisy fanazavana an'ilay mpikaroka nidina niasa teny an-kianja, ao amin'ny faritra mizaka tenan'i Gorno-Badakhshan, izay mikorontana, any Tanjkistan. Tamin'ny folakandron'ny 16 Jona, niely voalohany ny tatitra momba ny nisamborana an'i Alexander Sodiqov raha nivory niaraka tamin'i Alim Sherzamonov, izay solotenam-paritra avy ao amin'ny antoko mpanohitra “Antoko Sosialy Demaokraty” ao Tajikistan, ilay mpikaroka, mpianatra manomana “doctorat” ao amin'ny anjerimanontolon'i Toronto, teraka tao Tadjikistan, ary Mpamokatra lahatsoratra tao Azia Afovoany  fahiny ho an'ny Global Voices, araka ny tatitry ny RFE/RL amin'ny fiteny Tajik .
Tonga dia nanao fanambaràna tao amin'ny mediam-panjakana Khovar.tj, tamin'ny 17 Jona, ny GKNB ao Tadjikistan (misahana ny filaminana ao amin'ny Fanjakana), nanamarina fa notanana tokoa i Sodiqov noho izy nanao “fikomiana sy fitsikilovana” ho anà firenena iray any ivelany, fiampangaina izay nifandray tamin'ny hafatra nalefan'i Sodiqov ny 10 Jona tao amin'ny kaontiny, (tsy nilaza moa izy ireo hoe fomba ahoana no nahazoany niditra tao amin'ilay kaonty, na koa hoe nataony taloha sa taorian'ny fitànana an'i Sodiqov izany). Nino sy naminavina ilay “firenena any ivelany” ho i Angletera ireo mpiasan'ny GKNB, noho ny fikarohan'i Sodiqov mahazo famatsiana ara-bola avy amin'ny Kaonsily Britanika momba ny Fikarohana ara-Toekarena sy Sosialy. Naneho ny fanahiany  ny amin'ny fomba fitànana an'i Sodoqov ny fanambaràna iray avy amin'ny masoivoho Britanika.
Sarin'ny Khorog, Tajikistan, avy amin'i Zack Knowles. Nahazoana lisansa Creative Commons BA-SY 3.0 ny nampiasàna azy.
Nanao izao fanambarana izao, tao amin'ny media sosialy i John Heathershaw, lehiben'i Sodiqov amin'ilay tetikasa, ny harivan'ny 16 Jona:
“Efa ho ora 20 izao no lasa hatramin'ny nahenoanay ny momba an'i Alexander Sodiqov, izay nosamborina nandritra ny nanaovany fikarohana tany Tajikistan. Tsy mbola hainay raha efa navotsotra izy izao na mbola voatàna ihany.
Nosamborin'ireo mpisahana ny filaminana i Alexander Sodiqov, mpikaroka miasa ho an'ny Oniversite-n'i Exeter, raha iny izy nifampitafa taminà solotenan'ny fiarahamonim-pirenena tao Khorog iny, any amin'ny faritra atsinanan'i Badakhshan.
Nanao fikarohana ho an'ny tetikasan'ny Kaonsily Britanika momba ny Fikarohana ara-Toekarena sy Sosial i Sodiqov, antsoina hoe Ireo Hery Vao Misondrotra sy Ny Fisahanana ny Fifandirana any Azia Afovoany, izay misy idiran'ny Anjerimanontolo any Newcastle sy ny ONG Saferworld ihany koa. Olom-pirenena Tajikistan izy, ary mpianatra manomana “doctorat” ao amin'ny Anjerimanontolo ao Toronto, monina ao Canada. Mpampianatra eny amin'ny Anjerimanontolon'i Exeter ary lehibeny amin'ilay tetikasa fikarohana ny mpiara-miasa aminy, John Heathershaw. Manadihady ny fomba fiasa ataon'ireo mpisehatra iraisam-pirenena, fanjakana ary ny fiarahamonina sivily, mba hampilamina io fifandirana io.
Tsy mbola nahenoana vaovao moa i Alexander hatramin'ny nitànana azy tamin'ny Talata 16 Jona ny 2.30 ora hariva (9.30 ora maraina GMT). Manahy mafy ny momba azy ireo fianakaviany sy ireo namany.”
Nitafatafa niaraka tamin'i ” Asia Plus”, media tsy miankina any an-toerana, i Heathershaw taorian'izay, ny 17 Jona, nitondra ny lohateny hoe “Mpikaroka i Alexander fa tsy Mpitsikilo.” Nilaza tao amin'ny tranonkala EurasiaNet.org ihany koa i Heathershaw fa nikorontana ambony ambany ny tranon'ny renin'i Sodoqov ao Dushanbe, nandritra ny fisavàna nataon'ny mpitandro ny filaminana. Nalain'ireo manampahefan'ny mpitandro filaminana tamin'izany ireo “clés USB” sy ireo solosaina.
Toa tsy fantatr'ireo manampahefana Tajik akory, na dia tao Dushanbe aza, i Sodiqov talohan'ny fisamborana azy. Fantatra kokoa amin'ny maha-mpamakafaka azy any Azia Afovoany i Sodiqov , nanoratra matetika momba ny Tajikistan ary ny faritra amin'ny ankapobeny, ho an'ireo mpamoaka vaovao toy ny Jamestown, ho fanampin'ny Global Voices. Naneho hevitra taminà tafatafa tao amin'ny tranonkala EurasiaNet.org ihany koa izy, efa maromaro izay, ary izy ihany koa no mpanoratra fototra ao amin'ilay bilaogy Tajikistan Monitor. Nialohan'ny nidirany tao amin'ny Anjerimanontolon'i Toronto, efa nitàna andraikitra maro tao amin'ny biraon'ny Dushanbe momba ny Fikambanana ho amin'ny Fandriampahalemana sy ny Fiaraha-miasa ao Eorôpa, ary efa nampianatra tao amin'ny Anjerimanontolo Rosianina-Tajik, i Sodiqov.
Raha nitatitra  ny RFE/RL fa navotsotra androany i Sodiqov, ny vadiny Musharraf Sodiqova kosa tsy mbola nanamafy ny fihaonany tamin'ilay mpamakafaka. Na ahoana na ahoana ny tohin'io, raisin'ny maro ho toy ny fampitandremana avy amin'ireo manampahefana Tajik ao Khorog ny fisamborana azy, izay ivon'ny fifandonana maherivaikan'ny governemanta sy ny mpanohitra, namoizana ain'olona  tamin'ny volana Jolay 2012, ary koa fikorontanana majinijinika  tamin'ny volana May, tsara kokoa raha tsy mametraka fanontaniana, na mitady valiny mihitsy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/06/27/60905/
 Mpamokatra lahatsoratra tao Azia Afovoany: https://globalvoicesonline.org/author/alexander-sodiqov/
 araka ny tatitry ny RFE/RL amin'ny fiteny Tajik: http://rus.ozodi.org/content/article/25423828.html
 nanamarina : http://www.khovar.tj/rus/security/41306-zayavlenie-ugknb-rt-po-gbao.html
 fifandonana maherivaikan'ny governemanta sy ny mpanohitra, namoizana ain'olona: http://www.eurasianet.org/node/65705
 fikorontanana majinijinika : http://www.eurasianet.org/node/68406